Nhau - Chii chinonzi USB-C uye nei uchichiida?
Chii chinonzi USB-C uye nei uchichiida?
USB-C ndiyo inobuda standard yekuchaja uye kuendesa data. Parizvino, inosanganisirwa mumidziyo senge matsva malaptop, nhare, uye mapiritsi uye - yakapihwa nguva - inozopararira kune zvakanakisa zvese izvo zviripo zvino zvinoshandisa chekare, hombe USB chinongedzo.
USB-C inoratidzira nyowani, diki yekubatanidza chimiro inodzoserwa saka zviri nyore kuvhara mukati. Tambo dzeUSB-C dzinogona kutakura zvakanyanya simba, saka dzinogona kushandiswa kubhadharisa michina hombe semalaptop. Ivo zvakare vanopa kumusoro kuti vawedzere kumhanyisa kumhanyisa kumhanya kweUS3 pa10 Gbps. Nepo zvinongedzo zvisiri kumashure zvinowirirana, zviyero zviri, saka maadapter anogona kushandiswa nemidziyo yekare.
Kunyangwe iwo maratidziro eUSB-C akatanga kuburitswa muna2014, zviri chaizvo mugore rekupedzisira iro tekinoroji yabata. Izvozvi zvave kuumbika kumusoro kuti ive yekutsiva chaiko kwete kweayo chete akura USB zviyero, asi zvakare mamwe maitiro akaita seThunderbolt uye DisplayPort. Kuedzwa kuri mumabasa kuendesa nyowani USB odhiyo standard uchishandisa USB-C seinogona kutsiva iyo 3.5mm odhiyo jack. USB-C inosunganidzwa pamwe nemamwe mitezo mitsva, zvakare- senge USB 3.1 yekumhanyisa kumhanya uye USB Simba Dhirivhari yekuvandudza simba-kuendesa pamusoro pe USB kubatana.
Type-C Inoratidza Nyowani Connector Shape
USB Type-C ine nyowani, diki diki yekubatanidza- ingangoita saizi diki USB chinongedzo. Iyo USB-C yekubatanidza pachayo inogona kutsigira dzakasiyana siyana dzinonakidza nyowani USB standard senge USB 3.1 uye USB simba kuendesa (USB PD).
Iyo yakajairwa USB yekubatanidza iwe yaunonyanya kuziva ndeye USB Type-A. Kunyangwe sekufamba kwatakaita kubva paUSB 1 kuenda paUSB 2 uye tichienda kuzvimazuva ano USB 3 zvishandiso, chinongedzo ichi chakaramba chakafanana. Yakakura sekare, uye inongobaya neimwe nzira (iri pachena kuti haina kumbobvira yaita nzira yaunoyedza kuiisa iyo kekutanga). Asi sezvo zvishandiso zvikava zvidiki uye zvakatetepa, iwo mahombe USB madoko aisakwanira. Izvi zvakapa kuwanda kwevamwe mamwe maumbirwo e USB senge "micro" uye "mini" zvinongedzo.
Iyi yekuunganidzwa isinganetsi yezvisikwa zvakasiyana-siyana zvakaumbwa zvakasiyana-saizi zvishandiso iri pakupedzisira kusvika kumagumo. USB Type-C inopa nyowani yekubatanidza muyero idiki kwazvo. Iyo ingangoita chetatu saizi yeakare USB Type-A plug. Iyi ndiyo imwechete yekubatanidza chiyero icho chishandiso chese chinokwanisa kukwanisa kushandisa. Iwe unongoda imwechete tambo, kunyangwe uri kubatanidza yekunze hard drive kune yako laptop kana kuchaja yako smartphone kubva kune USB chajaja. Iyo diki diki yekubatanidza idiki zvakakwana kuti ikwane mune yakanyanya-yakatetepa nhare mbozha, asi zvakare ine simba rakaringana kubatanidza zvese zvinongedzo zvaunoda palaptop yako. Iyo tambo pachayo ine USB Type-C chinobatanidza pamativi ese ari maviri — icho chiri chimwe chete chinobatanidza.
USB-C inopa zvakawanda zvekuda. Inodzoreredzwa, saka hauchazofaniri kufirita chinobatanidza kutenderera kanenge katatu katatu uchitsvaga yakatwasuka. Iyo imwechete USB yekubatanidza chimiro chinofanira kutorwa nemidziyo yese, saka haufanire kuchengeta tambo dzakasiyana dze USB tambo dzakasiyana dzakasiyana dzekubatanidza kune ako akasiyana madhivha. Uye iwe unenge usisina mamwe mahombe makuru anotora huwandu husina basa hwechipenga pane anogara-akatetepa michina.
USB Type-C madoko anogona zvakare kutsigira akasiyana akasiyana maprotocol achishandisa "mamwe maitiro," ayo anotendera iwe kuti uve nemaadapter anogona kuburitsa HDMI, VGA, DisplayPort, kana mamwe marudzi ekubatanidza kubva kune imwechete USB chiteshi. Apple's USB-C Dhijitari Multiport Adapter muenzaniso wakanaka weiyi, ichipa adapta iyo inobvumidza iwe kubatanidza iyo HDMI, VGA, hombe USB Type-A zvinongedzo, uye diki USB Type-C chinongedzo kuburikidza neimwe chiteshi. Iyo nyonganiso yeUSB, HDMI, DisplayPort, VGA, uye magetsi emachiteshi pane chaiwo malaptop anogona kuenzaniswa mune imwechete mhando yechiteshi.
USB-C, USB PD, uye Kuendesa Simba
Iyo USB PD kududzirwa kwakanyatso kusunganidzwa ne USB Type-C. Parizvino, USB 2.0 yekubatanidza inopa inosvika ku2,5 watts emagetsi-akakwana kubhadharisa foni yako kana piritsi, asi ndizvozvo. Rondedzero yeUSP PD inotsigirwa neUSB-C kukwirisa kwesheni iyi kuendesa kuma100 watts. Iyo bi-inotungamira, saka chishandiso chinogona kutumira kana kugamuchira simba. Uye simba iri rinogona kuendeswa panguva imwechete iyo kifaa chiri kuendesa dhata kwese kubatana. Rudzi urwu rwekutakura magetsi runogona kutokutendera kuti ubhadhare laptop, iyo inowanzo inoda kusvika kuma60 watts.
USB-C inogona kuperetera kupera kweavo vese vanezvigadzirwa zvemalaptop ekuchaja tambo, nezvose zvinobhadharisa kuburikidza neyakajairwa USB kubatana. Iwe unogona kana kuchaja yako laptop kubva kune imwe yeayo anotakurika bhatiri mapakeji iwe yaunobhadharisa mafoni ako uye nezvimwe zvinotakurika zvigadzirwa kubva nhasi. Unogona kubaya laptop yako muchiwoniso chekunze chakabatana netambo yemagetsi, uye iyo yekuratidzira kwekunze yaizochaja laptop yako sezvawaishandisa sekuratidzira kwekunze - zvese kuburikidza neiyo diki diki USB Type-C yekubatanidza.
Kune kamwe chete kubata, zvakadaro-zvirinani panguva yacho. Kungoti nekuti mudziyo kana tambo inotsigira USB-C zvinoreva kuti inotsigirawo USB PD. Nekudaro, iwe unofanirwa kuona kuti zvishandiso netambo zvaunotenga zvinotsigira zvese USB-C uye USB PD.
USB-C, USB 3.1, uye Transfer Rates
USB 3.1 ndeye itsva USB standard. USB 3's theoretical bandwidth ndeye 5 Gbps, nepo USB 3.1 iri 10 Gbps. Iko zvakapetwa bandwidth-nekukurumidza seyekutanga-chizvarwa Thunderbolt chinongedzo.
USB Type-C hachisi chinhu chakafanana neUSB 3.1, hazvo. USB Type-C ingori chinongedzo, uye tekinoroji yepasi inogona kungova USB 2 kana USB 3.0. Muchokwadi, Nokia N1 Android piritsi inoshandisa chinongedzo che USB Type-C, asi pasi payo pane ese USB 2.0- kunyangwe USB 3.0. Nekudaro, aya matekinoroji ane hukama zvakanyanya. Paunenge uchitenga zvishandiso, iwe unongoda chengeta ziso rako pane izvo zvinyorwa uye uve nechokwadi chekuti uri kutenga zvishandiso (uye tambo) zvinotsigira USB 3.1.
Kudzokera Kumusoro Kugarisana
Chinobatika USB-C chinongedzo hachisi kumashure chinowirirana, asi iyo yepasi USB standard iri. Iwe haugone kubaya madhiraivhi ekare e USB mune yazvino, diki USB-C chiteshi, uye haugone kubatanidza USB-C chinongedzo mune yekare, hombe USB chiteshi. Asi izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kurasa zvese zvako zvekare zviwanikwa. USB 3.1 ichiri kumashure-inowirirana neshanduro dzekare dzeUSB, saka iwe unongoda adapta yemuviri ine USB-C chinongedzo kune rimwe divi uye hombe, yechinyakare-dhizaini USB chiteshi kune rimwe divi. Iwe unogona ipapo kuvharira ako ekare zvishandiso zvakananga mu USB Type-C chiteshi.
Chaizvoizvo, makomputa mazhinji achave neese maviri USB Type-C madoko uye akakura USB Type-A madoko kune iro ramangwana ramangwana. Iwe unozogona kushomeka zvishoma nezvishoma kubva kune ako ekare zvishandiso, kuwana mitsva mitsva nematanho e USB Type-C.
Kusvika kutsva 15.6 ”Inotakurika yekutarisa ine USB-C chinongedzo
Post nguva: Jul-18-2020